जब श्रीमानकी मिल्ने साथीसँग श्रीमतीको बस्यो प्रेम ! « Nagarik Khabar
जब श्रीमानकी मिल्ने साथीसँग श्रीमतीको बस्यो प्रेम !
प्रकाशित मिति : 11 July, 2021 4:05 pm
काठमाडौं । अमेरिकाको सिएटलमा एक विवाहित जोडीको जीवनमा एक महिला अनौठो तरिकाले प्रवेश गरेकी छन् । श्रीमान, श्रीमतीको जीवनमा कुनै तेस्रो व्यक्तिको प्रवेशबारे सुनिरहेको हामिले यो घटनाले भने आश्चार्य लाग्न सक्छ ।
विवाहपछि जब श्रीमानलाई आफ्नी श्रीमती द्वीलिङ्गी भएको थाहा भएपछि उनले श्रीमतीलाई उपहारमा उनको प्रेम दिएका छन् । अर्थात्, श्रीमानले ती महिलालाई घरमा ल्याए जसलाई उनकी श्रीमतीले प्रेम गर्थिन् । त्यसपछि यी तीनजनाको जीवन कसरी चलिरहेको भन्नेबारे खबर सार्वजनिक भएको छ ।
अमेरिकाको यो जोडीको प्रेम कहानीको सुरुवात कलेजबाट भएको बताइएको छ । श्रीमान् जस्टिन व्यावसायिक रुपमा हास्यकलाकार हुन् । उनका अनुसार सन् २००६ मा एक कमेडी शोको क्रममा उनको भेट रियल स्टेट असोसिएट केटी रुपलसँग भएको थियो । यो भेट प्रेममा बदलियो । यी दुईले एक–अर्कालाई थुप्रै वर्षसम्म डेट गरे ।
सन् २०१३ मा केटी र जस्टिनले विवाह गरे । विवाहपछि श्रीमान्–श्रीमतीबीच केही कुरा लुक्दैन भन्ने गरिन्छ । यस्तै, एक गोप्य जानकारीबारे जब केटीले श्रीमानलाई बताइन्, तब उनी हैरान भएका थिए ।
उनको भनाई अनुसार उनी द्वीलिङ्गी हुन् र यसबारे आफू उत्सुक भएको र थप जानकारी लिन चाहेको बताइन् । त्यसपछि उनले जस्टिनकी साथी क्लेयरबारे कुरा गरिन् । क्लेयरलाई उनले आफ्नो सोसल मिडिया अकाउन्टमा देखेको र उनीतर्फ आफू आकर्षित भएको पनि केटीले श्रीमानलाई बताइन् ।
जस्टिनका अनुसार ३६ वर्षीया क्लेयर थोर्नहिल उनकी कलेजकी साथी हुन् । जब आफ्नी श्रीमतीले क्लेयरलाई प्रेम गर्ने उनले थाहा पाए तब एकदिन उनले श्रीमतीसँग मिलेर क्लेयरलाई यसबारे कुरा राखे ।
यो निर्णयले उनका आमाबुवालाई कुनै समस्या भएन तर उनीहरुले थुप्रैपटक अनलाइनमा ट्रोलको भने सामना गर्नुपरेको छ । क्लेयर भन्छिन्, ‘एक मानिसको रुपमा, हामी कुनै एक व्यक्तिका लागि आफ्नो प्रेम कम नगरीकनै थुप्रै मानिसहरुलाई प्रेम गर्न सक्षम छौं र हामी एक–अर्कालाई पाएर निकै भाग्यमानी छौं ।’ ‘हामीलाई आफ्नो साझेदारीमा गर्व छ र चाहन्छौं कि कसैलाई प्रेम गरेकै विषयमा तपाईंले लज्जा महसुस गर्नुपर्दैन भनेर जानकारी दिन चाहन्छौं ।’, उनले भनिन् ।
साथीसँग बस्यो प्रेम
कागुनले १५ प्रतिशतसम्म मधुमेह कम गर्ने रिसर्चको दाबी
एजेन्सी । कागुनको सेवनले टाइप–२ डाइबिटिजको खतरा कम गर्ने र शरीरमा ब्लड सुृगरको स्तर पनि